Inona ny atao hoe Marketing-based Account? | Martech Zone
Fivarotana miorina amin'ny kaonty (Acronym: ABM) dia lasa a dia tsy maintsy manana ho an'ny orinasa B2B. Miorina amin'ny fanadihadiany ireo mpivarotra B2B, namarana ny ITSMA:
ABM dia manome ny tambiny avo indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny tetika na taktika marketing B2B. Fe-potoana.
SiriusDecision ny Fianarana 2015 momba ny varotra miorina amin'ny kaonty (ABM) nahita fa ny 92% an'ny mpivarotra B2B dia nilaza fa ny ABM dia tena or tena manan-danja amin'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra ankapobeny.
Araka ny Megan Heuer, Filoha lefitra ary talen'ny vondrona ao amin'ny SiriusDecision:
Ny tena manintona an'i ABM amin'izao fotoana izao dia ny fomba atambatra ny fomba fijery momba ny paikady sy ny teknolojia fanatanterahana. Ny ekipa mpivarotra izay mahatakatra ny ABM dia manana toerana matanjaka hifanaraka amin'ny filan'ny varotra ary hanao safidy tsara momba ny hetsika tokony horaisina sy ny fotoana mety hitondrana azy ireo hitombo kaonty mety be.
Ny marketing amin'ny kaonty dia mety hitondra ny tontolon'ny B2B amin'ny tadion, fa inona no tena tafiditra ao ary maninona ny fientanam-po rehetra? Andao hojerentsika lalina kokoa.
Miantso ABM ny Wikipedia fomba stratejika business marketing izay ivondronanà fikambanana iray hevitra sy ifandraisany amin'ny volan'ny tsirairay na kaontin'ny mpanjifany ho tsenan'ny iray. Jon Miller an'ny Engagio hoy i ABM mandrindra ny ezaka manokana momba ny varotra sy ny varotra hanokatra varavarana ary hanamafisana ny fandraisana andraikitra amin'ny kaonty manokana.
Na dia misy fomba maro aza hilazana ny ABM, ny ankamaroan'ny mpitsabo dia manaiky hevitra ifotony vitsivitsy. Fampielezan-kevitra ABM:
Mifantoha amin'ireo rehetra mandray fanapahan-kevitra lehibe ao anatin'ny orinasa (kaonty), tsy fanapahan-kevitra lehibe iray (na persona) fotsiny,
Jereo ny kaonty tsirairay amin'ny maha "tsenan'olon-tokana" azy, miaraka amina sosokevitra fandefasan-kafatra sy sanda namboarina ho an'ny filan'ny orinasa tsirairay avy
Mampiasà votoatiny sy fandefasan-kafatra mahazatra mikendry ny hamahana ny olana manokana momba ny orinasa sy ny fotoana mety hitrandrahana azy
Diniho tsy ny fivarotana indray mandeha ihany fa ny sanda mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa tsirairay rehefa mametraka laharam-pahamehana
sarobidy kalitao noho ny habetsany rehefa mitarika.
Tetika mahazatra, kendrena mahomby kokoa
Ny vaovao mahafaly ho an'ireo mpivarotra maniry ny hanandrana fomba ABM dia tsy hafahafa sy tsy vaovao ireo fitaovana sy tetika; mifototra amin'ny fomba voaporofo efa nampiasain'ny mpivarotra B2B nandritra ny taona maro izy ireo:
Fanatsarana ivelany miaraka amin'ny mailaka, telefaona, media sosialy ary mailaka mivantana
Fivarotana entana miaraka amin'ny atiny avo lenta, fitorahana bilaogy, webinar ary fidirana amin'ny media sosialy
Tetika nomerika toy ny doka mifototra amin'ny IP sy ny famerenana amin'ny laoniny, ny dokam-barotra amin'ny tambajotra sosialy, ny fanaingoana ny tranonkala ary ny gen lead lead
Events, seho ara-barotra, hetsika mpiara-miasa ary antoko fahatelo
Ny fahasamihafana lehibe dia amin'ny fomba itodihana ireo fitaovana sy tetika ireo. Hoy i Miller:
Tsy momba ny tetika iray akory izany; ny fifangaroan'ny fikasihana no mahatonga ny fahombiazana.
Famindrana ny fifantohana amin'ny Persona mankany amin'ny kaonty
Ny fomba ara-barotra B2B nentim-paharazana dia mifototra amin'ny famantarana ny karazana mpanapa-kevitra (na ny persona) mety sy ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny marketing hahasarika ny sain'izy ireo. Ny ABM dia mitarika fiovana manomboka amin'ny fitadiavana olona amin'ny ankapobeny mankany amin'ny famaritana ireo vondrona misy fiantraikany manokana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny IDG tamin'ny taona 2014, olona 17 no miantraika amin'ny fividianana orinasa mahazatra (hatramin'ny 10 tamin'ny 2011). Ny fomba ABM dia manaiky fa rehefa mivarotra vokatra na vahaolana manokana amin'ny orinasa ambaratonga orinasa dia mety mila mametraka ny hafatrao eo imason'ny olona maro amin'ny ambaratongam-pahefana samy hafa miaraka amina asa samy hafa ianao.
Ny Fitaovana mety dia mahamora kokoa ny fanaovana ABM
Satria ny ABM dia fomba manokana, miankina amin'ny angona firaketana tsara. Raha tsy manana daty vaovao sy daty marina ianteherana ianao, ny fanatrarana ny olona rehetra ao anaty rojim-panapahan-kevitra ao anaty fikambanana dia mety ho sendra tsy hita. Toy izany koa ny ezaka hikendrena dokam-barotra fampisehoana doka sy fanatrarana an-tserasera amin'ny alàlan'ny adiresy IP orinasa.
Ireo mpivarotra ABM nahomby dia nahalala izany vinavina izany Analytics ireo sehatra natao ho an'ny fitarihan'ny mpitarika B2B dia manome angon-drakitra mitarika marina sy feno hanatanterahana ny ABM. Faminaniana mialoha Analytics Ny vahaolana dia afaka manampy ihany koa hamantatra ireo orinasa mety kendrena mifototra amin'ny fahavononany hividy, hamonjy fotoana ary hampitombo ny vintana fahombiazana
Ny ankamaroany koa dia miharo amin'ny sehatra automatisation marketing toa Marketo sy Eloqua, ary fitaovana CRM toa ny Salesforce. Ny fampidirana miaraka amin'ny automatisation marketing sy CRM dia ahafahan'ny orinasa manomana, mampihatra, mandrefy ary manatsara ny fampielezan-kevitra ABM amin'ny alàlan'ny tahiry marketing misy azy ireo.
Target, tsena, refy
Ankehitriny rehefa azonao ny fototra, ahoana no hanombohanao? Ny dingana voalohany amin'ny fampiharana fanentanana ABM dia ny famantarana ireo kaonty lasibatrao. Angamba efa fantatrao izay tianao ho kendrena indrindra. Raha izany dia mankanesa any. Raha tsy manao izany ianao, na raha mitady hanangana orinasa vaovao ianao, dia misy lisitry ny vokatra vaovao na mitondra fitarihana vaovao ho an'ny orinasa efa misy, dia mila lisitry ny vinavina.
Satria ny ABM dia mifantoka amin'ireo orinasa mety ho mpanjifa tsara indrindra aminao, tokony ho fantatrao hoe manao ahoana ny orinasanao manantena tsara. Midika izany fa ireo vinavina izay tsy vitan'ny hoe hiova ihany, fa koa hiteraka sanda maharitra.
Ny mombamomba anao mpanjifa tsara indrindra dia tokony hahitana demografika, ary koa data angon-drakitra, ary anton-javatra amin'ny fitondran-tena, mety sy finiavana. Inona ny haben'ny orinasa mety? Ohatrinona ny vola miditra isan-taona amin'izy ireo? Indostria inona no iasan'izy ireo? Aiza no misy azy ireo? Ho fanampin'izay, ny mombamomba ny mpanjifa tsara indrindra dia tokony hitady fika amin'ny fitondran-tena avy amin'ny vinavina, toy ny impiry nitsidika ny tranokalanao, ary koa ny fahatakarana ny vokatra sy serivisy hafa ampiasain'izy ireo amin'ny fomba fividianany.
Arindra sy ataovy lohalaharana
Raha vantany vao hitanao ny vinavinan'ny kalitao, ny dingana manaraka dia ny fandaminana sy ny fanaovana laharam-pahamehana ny lisitra, ary hanao drafitra ara-barotra hampidirana ireo mpitarika matanjaka indrindra. Araka ny voalaza tetsy ambony, tsy mitady olona kendrena ianao, fa ny mpanapa-kevitra rehetra ao anatin'io orinasa io. Izany dia mitaky fomba marketing matotra kokoa izay manitatra ny fahafahan'ny hafatra amin'ny fantsona maro. Ity fomba fiasa ity dia mety ahitana doka fampiroboroboana, marketing ivelany, media sosialy sy maro hafa. Ny lakile dia ny hiarahan'ny ekipa marketing sy ny varotra hiara-miasa akaiky hahatratra ny tanjona iraisan'izy ireo.
Ny zava-misy fa ny ABM dia mitambatra ny varotra sy ny marketing dia goavana. Tatitra Marketo fa ny 50 isan-jaton'ny fotoana fivarotana dia lanilany amin'ny fananana vokatra tsy mamokatra ary ireo reps dia tsy miraharaha ny 50 isan-jaton'ny fitarihana marketing. Ny fametahana diso dia tsy vitan'ny famoahana famokarana very, fa koa fahaverezan'ny asa aman-draharaha. Araka ny MarketingProfs, fikambanana manana zaridaina #sales sy #marketing mifanentana mafy dia miaina 36 isan-jato ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa ary 38 ny tahan'ny fandresena avo lenta.
Mifantoha amin'ny sanda mandritra ny androm-piainana
Miaraka amin'ny ABM, ny fanidiana fifanarahana dia tsy ny fara tampon'ny fifandraisana, fa ny fiandohany. Raha vantany vao lasa mpanjifa ny prospect dia ilaina ny mitazona azy ireo ho afa-po. Mila data io. Ny fikambanana B2B dia mila mahafantatra izay mitranga aorian'ny fividianan'ny mpanjifa, izay ampiasainy ary tsy ampiasainy, ary inona no mahomby amin'ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia tsy sarobidy raha tsy azonao atao ny mitazona ny orinasany. Manao ahoana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vokatra? Ahiana hiala ve izy ireo? Kandidà tsara amin'ny upsell na cross sell ve izy ireo?
Miaraka amin'ny ABM Leads, kalitao mihoatra ny habetsany
Ny isan'ny ny fitarihana sy ny fahafaha-manao dia tsy ampy handrefesana ny ABM. Ny paikady dia tsy miasa amin'ny famaritana nentim-paharazana ny firaka, ary manome lanja ny kalitao noho ny habetsahana. Taloha, ny ABM dia nampiasaina tamin'ny alàlan'ny orinasam-pandraharahana be zotram-bola ary afaka mandany fotoana sy vola be ao anatin'ny fikirakirana avo lenta. Androany, ny teknolojia dia manampy amin'ny automate sy ny refy amin'ny ABM, izay mampihena ny vidiny ary mahatonga ny ABM ho mora idiran'ny orinasa amin'ny habe rehetra. Asehon'ny fikarohana mazava fa mizotra mankany amin'ny ABM ny varotra B2B. Resaka haingam-pandeha fotsiny izany.
Tags: abmmarketing miorina amin'ny kaontymarketing amin'ny kaontydokam-barotrafitorahana bilaogymail mivantanaeloquamailaka Marketingmampihiditradoka ip-basedmitarika genLeadspacemarketoMivoakafampisehoana varotra lead genhetsika mpiara-miasapersonalizationfinday prospectingretargetingsalesforcehaino aman-jery sosialyhetsika ankolafy fahateloambony fantsonapersonalization amin'ny tranonkalaWebinarsinona ny abminona ny marketing amin'ny kaonty